Wako Akavimbika OEM / ODM Partner ye LED Mwenje
Professional LED mwenje mugadziri anopa OEM / ODM sevhisi
Chinangwa chedu ndechekugutsa vatengi vedu nehunyanzvi hwepamusoro uye hwakavimbika mhando kuona kuti mutengi wese anonzwa kugadzikana uye aine chivimbo nezvinhu zvedu mukushandisa kwavo.
Mafashama Mwenje (B Series Mafashama Mwenje)
Chiedza cheMafashama e LED Mafashama matsva emwenje we LEDIA anosanganisa simba-rinoshanda, advanced optical control, uye echizvino slim profile aesthetics kuendesa yakagadziriswa mashandiro kune mafashama emagetsi mafomu Dzimba dzakakombama-dzakafa dzinopa manejimendi manejimendi manejimendi yehupenyu hwakareba uye mamiriro ekunze-chiratidzo kukwirisa nharaunda dzakaoma, dzekunze. Basa Rinokosha ◆ Yakasimba, inofa-yakakandwa aluminium dzimba. ◆ Yakadzikama girazi lens inodzivirira kuvhunduka uye kukanganisa. Proof Rust uye ngura chiratidzo, zvakatipoteredza hupfu zvinhu. ◆ Brand yepamusoro giredhi maLED, yakakwira-kuburitsa, refu-hupenyu. Light Yakakwirira mwenje inoshanda inoratidzira uye yakanyorova girazi 4mm gobvu. Option Masikati sensor sensor. ◆ Bronze uye yakagadziridzwa mavara poda kupfeka kupedzisa
Mafashama Light Light Street Chiedza
AC100-27V / AC220-240V; Bracket gomo / Wall Gomo / Pole Gomo, Masikati Sensor, IP65, Grey / Nhema Kupedza, 5 Year Waranti, 4000K / 5000K / 6000K.
Chaiyo IP68 Led Strips
Chaiyo IP68 LED tambo, inokodzera kushandiswa kwekunze, yakakwana kune yepasi pemvura kunyorera. IP68 inochinjika tambo / IP68 tepi mwenje / IP68 tambo mwenje / Pasi pemvura inochinja tambo / Yepasi pemvura tepi mwenje / Flexible tambo yekutsvaira dziva / Tepi mwenje wekutsvaira dziva. Inokodzera swinging dziva, yekunze nhanho mwenje, yekunze yekushongedza mwenje etc.
COB Flex Strip - LEDIA Mwenje
1. COB Flex Series, COB inoshandura mhuri Inowanikwa kune imwe chete vara, inogadziriswa chena, RGB uye digital RGB. 2. Muchena chena COB Flex, Inowanikwa yeDC12 / 24V, Min. upamhi 3mm. 3. Imwe chete ruvara COB Flex, Inowanikwa yeRed, Green, Bhuruu, Yero, Amber etc. COB flex strip, inopfuurira isina-isina mwenje mwenje, yakakwana mwenje kuita, yakakwira CRI. COB inoshanduka tambo / COB tepi mwenje / Dot-isina COB tambo / isina Dota-isina COB tepi mwenje Inokodzera kuvharidzira mwenje
Makambani ekuvhenekera anotungamira mune epasirese
Kubva payakavambwa, LEDIA yanga ichitarisa pakupa seOEM / ODM sevhisi uye kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvakagadzirwa kune vatinoshanda navo.
1. Kubvunzurudza: Vatengi vanotaurira iyo yaunoda fomu chinhu, kuita kwekuita, hupenyu hupenyu, uye kutevedzera zvinodiwa.
2. Dhizaini: Dhijitari dhizaini inosanganisirwa kubva pakutanga kweprojekti kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro zvigadzirwa zvakagadzirwa kuti zvienderane nezvinodiwa nevatengi ..
3. Quality Management: Kuti tigone kupa mhando dzemhando yepamusoro, tinochengetedza zvinobudirira
& inoshanda Quality Management System.
Outdoor fungidziro mwenje
Indoor mutsara mwenje
Rori remugwagwa wekunze
Yakagadzwa muna 2004, Guangzhou LEDIA Lighting Co., Ltd inyika yepamusoro-tech inzvimbo iri muGuangzhou, China, inotsigira pasi peHongliZhihui Group (Top 2 LED package manufacturer muChina). Iine vanopfuura makumi matatu mainjiniya vane ruzivo uye CNAS yekuyedza lab, ISO 9001/14001 sisitimu manejimendi, LEDIA yanga ichipa yakakwira mhando yezvigadzirwa zvigadzirwa kune vedu vanokudzwa vehukama pasirese, kusanganisira LED Kunze Kwemwenje, LED Industrial Industrial Lighting, LED Yemabhizimusi Mwenje uye LED Yekushongedza Mwenje, ese ari DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC inokodzera.
Kubva payakavambwa, LEDIA yanga ichitarisa pakupa seOEM / ODM sevhisi uye kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana zvakagadzirwa kune vatinoshanda navo. Munguva yekusimudzira kwedu nekukurumidza, LEDIA inofara kuona vatinoshanda navo vachiwedzera kukura uye kusimba mumusika wavo uye vachishuvira kuenderera nehukama hwedu hwakasimba mumakore anotevera!